Washington DC Capitol Hill ayaa laga daadgureeyay 'hanjabaad bambo oo firfircoon'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Washington DC Capitol Hill ayaa laga daadgureeyay 'hanjabaad bambo oo firfircoon'
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Nin saarnaa gaari madow oo xamuul ah ayaa si toos ah u kaxeeyay dhismaha Maktabadda Congress-ka wuxuuna sheegtey in uu ku jiro walxaha qarxa gaariga, ka hor inta uusan soo bandhigin wax u muuqda inuu yahay wax qarxinaya.
Heeganka amniga ayaa maanta sare loogu qaaday Capital Hill.
Booliska ayaa faarujiyay agagaarka Maktabadda Congress -ka.
Booliiska ayaa ka jawaabayay gaari laga shakiyay meel u dhow Maktabadda Congress -ka.
Khamiistii, ayaa feejignaan xagga amniga ah laga soo saaray Capitol Hill ee Washington, DC iyadoo shaqaalaha loo sheegay inay ka guuraan dhismayaasha waxaana soo baxay warar sheegaya in booliisku ay baarayaan walxaha qarxa oo ku jira gaari xamuul ah.
Booliiska Capitol ee Mareykanka ayaa faarujiyay agagaarka Maktabadda Congress-ka ee Capitol Hill kadib markii darawal uu bannaanka u soo baxay uuna sheegay inuu bam ku haystay baabuurkiisa xamuulka qaada, ayuu yiri taliyaha booliiska.
Farriin qoraal ah, Booliska Capitol ee Mareykanka ayaa sheegay inay "ka jawaabayaan baabuur laga shakiyay meel u dhow Maktabadda Congress -ka" waxayna dadka ku booriyeen inay ka fogaadaan aagga.
Taliyaha booliiska Tom Manger ayaa u sheegay wariyeyaasha goobta ka agdhowaa in 9:15 subaxnimo xilliga maxalliga ah nin watay gaari xamuul madow ah uu si toos ah u kaxeeyay dhismaha Maktabadda Congress-ka Washington, DC waxayna ku andacoodeen in walxaha qarxa ay saarnaayeen gaariga, ka hor inta aysan soo bandhigin wax u muuqday qarax. Wada -xaajood ayaa lala galay darawalka si loo helo "xal nabadeed", ayuu yiri Manger.
"Ma garanayno waxa ku kalifay xilligan," ayuu taliyaha booliisku intaas ku daray.
Goor sii horreysay, sawir aan la xaqiijin oo laga soo qaaday meel ka baxsan Maktabadda Congress -ka ayaa u muuqday inuu muujinayo darawalkii oo weli saaran gaariga, iyadoo biilasha doollarka lagu daadiyay dhulka bannaanka gaariga.
Eedeysanaha ayaa sidoo kale la sheegay inuu dhajiyay muuqaal toos ah oo hadda la tirtiray oo la duubay isagoo fadhiya gadaashiisa kursiga gaariga ee ku dhex jira gaariga la dhigay, halkaasoo uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo uu ku andacooday inay haystaan ​​tiro bambooyin ah. Qeyb ka mid ah muuqaalada ayaa u muuqday inay muujinayaan waxa u muuqday haan gaas, walxaha qarxa oo caag ah iyo dhowr caag oo waaweyn oo isbeddel dabacsan ku yimid gaariga. Waxa uu sheegay in walxaha qarxa ee la sheegay in baabuurka xamuulka ah lagu shubay si loo qarxiyo oo kaliya cod dheer oo ku filan, sida muraayadda hore ee baabuurka oo xabbaduhu ku burbureen.
Ninkan ayaa sidoo kale ku andacooday inay jiraan afar kale oo walxaha qarxa ah oo yaal meelo aan la sheegin, isagoo ku andacoonaya in kuwa kale ay si gooni ah u soo rareen.
Facebook ayaa markii dambe xirtay akoonka isticmaale la yiraahdo Ray Roseberry kadib 30 daqiiqo oo toos ah.
Muuqaalo la wadaagay khadka tooska ah ayaa muujiyey tiro badan oo ah gaadiidleyda fulinta sharciga, oo ay ku jiraan baabuurta kooxda gurmadka degdegga ah oo khaas ah, kuna sii jeeda aagga xaddidan. Muuqaallada TV -ga, ayaa lagu arkay booliis oo isku gadaamay aagga, iyadoo la hordhigay carqalado si loo xaddido gelitaanka.
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee booliska Capitol ee Mareykanka, tuhmanaha ayaa ugu dambeyntii isku dhiibay saraakiisha.